Ọjọọ dị n'ime nyocha | Akụkọ akụrụngwa
Ọjọọ n'ime Ọ bụ aha nke mepụtara ọtụtụ atụmanya na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, ọkachasị maka ebumnuche abụọ: nloghachi na ụdị nke egwu lanarị site n'aka otu n'ime ndị okike nke Resident evil, ndị Japan Shinji mikami, na nzọ dị n'ụdị egwuregwu nke yiri ka ọ ga-ala n'iyi, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ka anyị nwere obi ụtọ na ya n'oge mbụ, ya na ndị ochie dị ka egwuregwu zombie ndị ahụ ama ama Capcom ma ọ bụ Silent Hill de Konami.
Egwuregwu Tango, na-akwado ya Bethesda, na-enye anyị aha na-agbasochi akara nke akara egwuregwu dịka nwụrụ anwụ Space, ma ọ bụghị ma ọlị na ọ ga-eme ka ọtụtụ ndị nwee mmetụta nke déjà vu mgbe niile ma ị chetara, pad na aka, ihe anyị bi ugbu a Onye bi na ya Ọjọọ 4 - mmemme kpomkwem otu onye nduzi- ihe karịrị 9 afọ gara aga, na mbido mbụ ya na outcast Egwuregwu Cube.
Kọwaa na Ọjọọ n'ime dị ka ahụmahụ mbụ ọ siri ike. N'otu aka, anyị nwere ụkọ akụ njikwa, nke nwere ike ichetara Omuma Akwukwo Nso; na nke ọzọ, e nwere visceral emereme ahụ nke nke Onye bi na ya Ọjọọ 4; N'ikpeazụ, anyị nwere mmetụ aka, nke bụ ihe kachasị amasị m banyere aha ahụ, nke na-eche echiche nke eziokwu ma na-agbagọ ha na ndapụta na ugbu a bụ clichés, dịka ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ụlọ mkpọrọ na mkpọmkpọ ebe, n'ụzọ doro anya Silent Hill.
Na agbanyeghi na ụdị echiche a sitere na ebe a nwere ike bụrụ ihe ọjọọ nye ụfọdụ, ha na-agbakọta n'ụzọ doro anya, agbanyeghị na igwe ọrụ oge ụfọdụ Ọjọọ n'ime ọ na-agbọ ụja n'ụzọ dị njọ. N'ozuzu, mmepe nke isi akara site na mmegbu nke oge ngwụcha ngwụcha nke ndị ọzọ na-esochi-nke nwere ike iche na njedebe nke egwuregwu ahụ ma ọ bụrụ na anyị enweghị akpachapụghị anya- niile dị n'ụzọ yiri nke a Onye bi na ya Ọjọọ 4mana wow, onye nyocha Sebastian Castellanos ọ bụghị dị ka agile dị ka gị n'ụlọnga Leon S Kennedy ma na-adakarị ngwangwa ma dịkwa nwayọ karịa onye ama ama lanarịrị nke Raccoon obodo.
Egwuregwu ahụ kewara n'ime isi -as RE4-, site na nyocha nke macabre nke ga-ato ndi mmadu uto, ma oburu na ichoghi aha nke puru iche maka akuku oru nke obi agha, nke nwekwara nsogbu nke NJ Nyocha 5, ebubo ọzọ na njikwa. Na ọkwa dị mma, anyị na-ahụ ọtụtụ ihe, nke nwere ebumnuche dị n'etiti, dị ka ịnakọta ihe dị iche iche -ihe atụ, igodo ndị ochie-, ma ọ bụ usoro mmegharị, nke na-eduga n'ọnọdụ nsogbu mgbe anyị na-abanye n'ìgwè nke ndị iro na-achụ anyị si ebe ọ bụla, ọ bụ ezie na n'ikpeazụ, ọtụtụ ọnọdụ na-eduga na nfe ahụ dị mfe.
Na-ekwu banyere ihe egwu na-ejupụta Ọjọọ n'ime, ọzọ anyị na-achọpụta mmetụta na imegharị echiche nke echiche site na ịmalite nke Mikami: Ndi mmadu ndi na-ebuso anyi agha na-aga n’ihu n’enweghi obi ojoo n’ebe gi no, ma oburu n’onye nyere ha ogbugba nke yiri ka o bu ihe ojoo, ha g’aga n’ihu na ari ari ma na agha rue mgbe ndu ha nke ikpe azu - na ihe aga ekwu banyere spawn nke di ka odi anya. ikwu Isi Pyramid-. Ọ na-adaba adaba ịmara otu esi eji ihe eji eme ihe na nke mgboagha ọ bụla: ọbụlagodi ihe dịka ezigbo echiche a priori nwere ike gbanwee anyị ngwa ngwa.
Mecha ihe egwu a nwere ike iwe ihe dị ka awa iri na ise, agaghị m akwado ogologo oge, n'ihi na ha nwere ike ịbụ obere ọrụ. N’ezie, n’etiti egwuregwu ahụ, ihe niile na-efunahụ mmasị ya, ebe ọ bụ na a na-emegharị igwe elegharị anya ugboro ugboro, anyị ga-agabiga ụfọdụ ọnọdụ na - esighi ike na akụkọ ahụ adịchaghị mma. Buru n’uche nke ahụ Bethesda atụmatụ ịmalite enwere ike ibudata ya ịgbatị oge nke egwuregwu ahụ - na sable ole na ole euro-, ebe anyị ga-esi banye na akpụkpọ nke Onye nche anyị ga-ejikwa onye mmekọ Sebastian, Juli Kidman kwuru. Dị ka ihe ederede, Ọjọọ n'ime Ọ na-aga-setịpụrụ na Spain, n'ihi ya ụfọdụ aha na Spanish na-echekwawo, ma Mikami O kpebiri igbanwe ọnọdụ ebe egwuregwu ahụ dị, n'okwu nke aka ya: “Ebube mbụ egwuregwu ahụ na Spain, ya mere ọtụtụ ederede nwere aha Hispanic na ọtụtụ usoro (a na-eme njem eserese na Spain) yana ndị ọzọ mmetụta, ha nọgidere na ngwaahịa ikpeazụ […] Ọ dị ka tuna tuna jidere na Spain nke mechara ghọọ sushi na Japan ”. Cheta na Onye bi na ya Ọjọọ 4 o mere "n'otu ebe na Europe" ebe a na-asụ Spanish.
Ọjọọ n'ime nwere ike ịdị ka mkpọtụ nke ọrụ ndị gara aga site na Shinji mikami, na ncheta pụrụ iche nke Onye bi na ya Ọjọọ 4 -Nkọwa ndị dị n'etiti ya na onye bi na nyocha a na-adịgide adịgide na egwuregwu ọ bụla maka m-. Anyị anaghị eche ihu egwuregwu egwu egwu, mana kama ụjọ ọzọ na-atụgharị na onye ọrụ 2005 - yana nnukwu ọrụ - yana na, ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe ọhụụ ma ọ bụ na-agbawa obi n'ozuzu ya, ọ bụ mmemme akwadoro maka ndị na-enwe mmasị na ebili mmiri nnukwu anụ na-egbusi ezé na mbọ ka ha na-arịgo n'ebe ị nọ na ndị na-akwado macabre. N'ezie, ọ bụrụ na ị tụrụ anya na ahụmịhe pụrụ iche na ị bụworị ndị maara ọrụ na mmemme a, ọ dị m nwute ịgwa gị na Ọjọọ n'ime Ọ bụghị ọrụ kacha mma ma ọ bụ nke mbụ Mikami.
AKWKWỌ AKW MUKWỌ AKW MUKWỌ MUNDIVIDEOJUEGOS 7.5
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » Nnyocha nke ihe ọjọọ n'ime
ThrottleStop: Etu esi eme ihe nhazi laptọọpụ dịka ọrụ gị si dị